isikhumba ezishukiwe ubukeka njalo amahle sexy, kodwa ukuze kuzuzwe elamukelekile ngendlela engokwemvelo, kuyodingeka ukuchitha ihora angaphezu kweyodwa elangeni noma solarium. Empilweni kunezikhathi lapho ingenayo isikhathi. Ngo ezinjalo esimweni kuzosiza tan osheshayo. Izimpendulo ezivela kulabo usukwenzile lokhu inqubo, omuhle kuphela, ngoba awunawo contraindications akakubangeli komzimba.
Ngaphambi kokuvakashela a salon ubuhle kudingeka alungiselele umzimba wakho, ikakhulukazi esikhumbeni:
1. Uma ngaphezu owesifazane tan osheshayo ihlele yokudaya izinwele, eyelashes noma izipikili, isibonelo, esenzakalweni esikhethekile, kumelwe wenze konke lokhu kusengaphambili.
2. Ukuze izinsukwana ukwenza izinwele ukususwa amanxeba amancane, niphulukiswe, kungukuthi kamuva thrashed elangeni. Ngalé kwalokho, kuzovela njengesithombe amachashazi amnyama.
3. Usuku ngaphambi kokuya wamakhaza ubuhle kufanele ulahle noma yikuphi imikhiqizo ukugcoba ubuso nomzimba, ikakhulukazi esikhumbeni amafutha. Kulokhu, osheshayo tan (izibuyekezo abesifazane siliqinisekise) ziyokuwa Ukuboshelwa.
4. Esikhathini amahora 8-10 kutuswa ushawa nge umzimba khuhla. Kuyokusiza ukususa amaseli isikhumba esifile, bese elangeni is ngokulinganayo basakaza.
5. Ngosuku lapho wamisa tan osheshayo e salon ubuhle ukusebenzisa noma isiphi imikhiqizo yezimonyo akuvunyelwe. Ukukhethwa kungenzeka esincane Mascara phezu eyelashes (ukugeza off kusihlwa ngaphandle isidingo soap) nail sula ezindaweni zawo waminza kanye isikhumba.
6. Umzimba kufanele kungabi ngemihlobiso. Oluthandwayo kungcono ukunikeza ilondolo amnyama (ukuthi kwaba yini into edabukisayo ibala), futhi izingubo okuxekethile. Uma kuwukuthi Friend naseduze, ezindaweni friction, ukwakheka kwamabala, ezinemibala Ukuboshelwa.
Yonke inqubo ithatha isikhathi esincane kakhulu, imizuzu engu-15 7 kuphela. Ukuze i tan ngokushesha, imishini uchwepheshe isebenzisa eziklanyelwe salokhu inqubo (bheka. Photo).
Lo mphumela ziyojabula eside uma izincomo ezilandelayo:
1. Ngemuva kokushiya ingaphakathi ukugwema kangcono contact umswakama kunoma yiluphi uhlobo amahora ambalwa.
2. Nakuba kokuthola amanzi eshaweni kufanele lizwakale linemfudumalo noma cool.
3. Kusukela isipanji kanzima kufanele uyekwe - kwenza isikhumba ngokushesha okukhulu kanye ezimhlophe.
4. Kahle kahle, ebusweni umzimba kuyadingeka ukuze humidify izikhathi 1-2 ngosuku, kuyokusiza ukuba ugcine umbala bushelelezi futhi ecebile.
5. Ekupheleni ithawula ukusebenzisa ukwelashwa amanzi kancane, ukunyakaza mnene, ngaphandle bezihlikihla isikhumba.
Ukugcina osheshayo tan, ukubuyekezwa, abesifazane abalahliwe, nochwepheshe iseluleko udinga ngekhanda futhi ngokuqinile asebenze.
isikhumba Lighter uzoqala ukuba abe ngesonto, tan ekugcineni osheshayo kuyofika baphendukela izinsuku ezingu-14. Uma kudingekile, geza nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa khuhla futhi loofah nangemva wathatha okugeza hot. Manje isikhumba usulungile inqubo entsha.
Elinye isu: umphumela akajabuli futhi waletha ngokungalungile, kumele baqikelele kukhethwa master, okuzokwenza ngomzuzwana tan. Izibuyekezo kuyoba ajwayelekile kulokhu kuyasiza kakhulu.
Salvage biorevitalization. Izibuyekezo ukunikeza umphumela osheshayo
Induna - isitha eyinhloko Youth
Yenza khuhla yekhofi cellulite ekhaya
Indlela ukubheka ezingaphansi kuka 7 izindlela bokuthi isayensi
Kwakukhona tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo ukuqeda ukuthi!
Kanjani ukushaya ehholo efulethini stylish futhi enhle?
Inkinga konyaka: Kwenzeka sunbathe esesikhathini?